बुहारी सरिता गिरीलाई नेपाल आमाको चिठ्ठी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२८ श्रावण २०७७, बुधबार २३:१७ English
बुहारी सरिता गिरीलाई नेपाल आमाको चिठ्ठी
सानु शाही ठकुरी, महोत्तरी ।
प्यारी बुहारी सरिता
मिठो माया ।
सक्छौ भने एक चोटि सुध्रिने मौका दिनेछु । अहिले म केही हदसम्म खुशी नै छु। किनकी मेरो शरीरको लुटिएको केहि अंश मेरा छोराछोरीले आफ्नो नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेका छन् । बुहारी तिमीमा पनि कुबुद्धीको हरण भै सद्बुद्दी पलाओस भनी श्री पशुपतिनाथसँग प्राथना गरेको छु ।
बुहारी २०३७ सालमा मेरो छोराले तिमीलाई बुहारी बनाएर भित्र्याउँदा म खुसी थिए । एउटा बिदेशी चेलीलाई आफ्नो घरमा भित्र्याउन पाउँदा भाग्यमानी महशुस गरेको थिए । ठुलो घरको चेलीबेटीलाई आफ्नो बुहारी बनाउनु पाउँदा बुहारी म कति खुशी थिए ।अब मेरो घरमा सहयोग मिल्नेछ । ठुलो घरमा ठुलै संस्कार सिकेकी हौली । मेरो छोराछोरीले केही गल्ती गरेछन् भने पनि तिमीले सिकाउने छौ, अब हाम्रो घर स्वर्ग हुनेछ । संस्कारी र पढेलेखेको बुहारीबाट घर चलाउन सहयोग मिल्छ भन्न्ने सोचेको थिए, तर बुहारी तिमी त मेरो घरमा आगो लगाएर आफ्नो माइतीलाई न्यानो दिन भित्रिएकि रहिछौ ।
म पनि मान्छु बुहारी तिमीलाई आफ्नो माइतीको माया लाग्नु स्वाभाविक हो । तिमीलाई हामीले आफ्नो माइतीको माया गर्दै नगर भनेको हैन । हरेक कुराको सीमा हुन्छ । तिमीले सीमा पार गर्यौ बुहारी । तिमीमा मातृभाषाको प्रभाव पर्नु, आफ्नो बाबा आमाको माया लाग्नु,ठिक हो । तर हद पार गर्यौ। तिमीले मेरो एउटा छोराको कमजोरीको फाइदा उठायौ । यो नसोच कि एउटा छोरा कमजोर भयो भन्ने बितिक्कै सबै छोराछोरीलाई कमजोर हुँदैनन् ।
तिमीले मेरा छोराछोरीको बलिदानीबाट बचाएको देशमाथि धावा बोल्ने कुनै अधिकार छैन । तिमी मेरो काखमा आउनुभन्दा सयौ वर्ष पहिलेदेखि मेरा छोराछोरीले पानी पनि नखाई युद्ध लडि अत्याधुनिक हातहतियारले भरिपूर्ण भएका अंग्रेज़ सेनालाई परास्त गरेको इतिहासमा तिमीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । मेरा छोरीहरु तिमीजस्तो कमजोर छैनन् पानी पनि नखाइ नालापानीको युद्ध लडेको, बलभद्र र भक्ति थापाको नाम पनि तिमीले सुनेकी नै छौ होला ।नेपालको एकीकरण गर्ने वीर पुरुष पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा पनि तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने हो । तिमी सक्छौ भने आफ्नो घर जुटाउने काम गर यदि सक्दैनौं भने भत्काउने दुस्साहस नगर । मेरा छोराछोरीले तिम्रो जीउँदै पुत्ला जलाइसके, तिम्रो जिउँदै काजकिरिया पनि गरिसके यो तिमीलाई सुध्रिने सवक सिकाएका हुन् । यति गर्दा पनि सुध्रेनौ भने बुहारी तिमीलाई मेरा छोराछोरीले जिउँदै जलाउन र वास्तविक रूपमा काजकिरिया गर्न बेर लाउने छैनन् । बुहारी म पनि आमा हुँ । तिमीले मलाई आमा नमाने पनि तिमीलाई मैले छोरीलाई दिने जतिकै माया दिएको थिए । तिम्रो यस्तो हालत गरे भने मलाई विश्व समाजले पापिनी सासु रैछे, छोरी र बुहारीमा विभेद गरि भनेर आरोप लगाउलान् । जे सुकै भनुन् भन्नेले बुहारी म आफै दाउमा बसेर तिमीलाई कुनै पनि हालतमा बचाउन सक्दिन ।
तिमीलाई बचाउन खोज्दा मेरा छोराछोरी टुहुरा हुनेछन् । मेरा छोराछोरीको छातीमा वैरीले छुरा रोपेको म कसरी हेर्न सक्छु बुहारी तिमी नै भन ? म आफ्नो छोराछोरीको रक्षाका लागि आफै बलि चढनु परेपनि तयार छु । तिमी यसमा अन्यथा नसम्झ तिम्रो आमाले पनि त्यही गर्छिन नपत्याए इतिहासको पाना पल्टाएर हेर । तिमी सक्छौ भने मेरा छोराछोरीसँग मिलेर अगाडि बढ, यदि सक्दैनौ भने मेरो छोरालाई सदाका लागि छोडेर जान सक्छौ । तिमी आफ्नै घरमा आगो लगाएर आफ्नै बारीको अन्न र आफ्नै भूमिको नुन खाएर माइतीको गल्तीलाई आत्मसात गरि माइतीको गुन गाउदै नहिड । यसले तिमी रानी हैन जीउँदै खरानी हुनेछौ ।
सुनेको छु, तिम्रो पार्टीले पनि तिम्रो नाम मेटि दियो रे अनि संसदबाट पनि हटाउने निर्णय गरे रे । म के गरुँ बुहारी न खुसी हुन सके न दुःखी नै । खुसी हौ बुहारीको प्रगति देख्न नसक्ने छुची सासू भन्लान्, दुखी बनुँ भने आफ्ना छोराछोरीले सहि कदम चालेका छन् । बुहारी मलाई कति दुख दिन्छौ ? मलाई शान्तिपूर्ण रूपमा बाच्न देउ । तिमी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हैन भन्ने हिम्मत गर्छौ भोलि के थाहा नेपाल मेरो श्रीमानको आमा नै हैन यो त भारत हो पनि भन्न बेर लाउदिनौ । त्यसैले बुहारी तिमीलाई आफ्नै माइतीको बिछट्टै माया लाग्छ भने तिमी मेरो छोराको घर सदाका लागि छोडेर जान सक्छौ ।
थाहा छ मलाई तिम्रो आमा म भन्दा धनी छिन । जतिसुकै धनी भए पनि धन र मन फरक कुरा हुन् । शरीरमा म भन्दा तिम्रो आमा कैयौं गुणा ठुलो भएपनि मनमा म जति ठुली रैनछिन् । २०७२ सालमा ६ महिना नाकाबन्दी लगाइन् । तिम्रो आमालाई थाहा हुनुपर्ने मेरी छोरी पनि छिन त्यहाँ, उसले पनि बाच्नुपर्छ छोरीको घरमा चुल्हो निभ्दा मैले बाली दिनु पर्छ भनेर, यो कुरा सोचिन् त तिम्री आमाले ? तिम्रो आमाले सबैथोक दिनुपर्ने त कहाँ हो र अरु ठाँउ बाट आउने बाटो बन्द गर्न मिल्छ ? तिमीले जस्तै मेरा छोराछोरीले पनि तिम्रो देशमा बसेर तिम्रो आमाको विरुद्ध बोलेका छन ? नेपाल आमाका छोराहरु गोर्खा सेनामा छन उनीहरूले तिमीले जस्तै बोल्दै हिडे भने के हुन्छ ? उनीहरू त झन हातहतियारले सुसंजित छन्, चाहे भने जे पनि गर्न सक्छन् । यो मेरो तिमीलाई धम्कि चाहिँ हैन सजक गराको मात्रै हुँ ।
बुहारी तिमीले जसको नुन खाएकी छौ, अनि जुन धर्तीमा पाइला टेकेकी छौ त्यसको विरुद्ध बोल्न कत्तिको उपयुक्त छ ? आफै सोच । नेपालीमा उखान छ नि, ‘जुन थालमा खायो त्याही छेड’ यस्तै मूर्ख मानवका लागि उपयुक्त रैछ यो ।
मेरी छोरी मनिषाले तिम्रो देशमा आफ्नो कला बेचेकी थिइन् । आफ्नो जन्मभूमिको बारेमा सही वकालत गरिन्, अनि तिम्रो आमाले धम्की दिइन अनि आइन् मेरि छोरी । तिमी त झन गलतलाई साथ दिइरहेकि छौ । तिमीलाई यहाँ बस्न मन छैन भने मेरो घर छोडेर अनि मेरो छोरासँग नाता तोडेर जान सक्छौ । तर मेरै नुन खाएर माइतीको गुन गाएर दलालको भूमिकामा बस्न तिमीले पाउने छैनौ ।
अन्तमा बुहारी धेरै के भनौ, सक्छौ भने तिमीले म र मेरो छोराछोरीको अगाडि माफी माग्यौ भने अझै पनि एक पटक म माफी दिनेछु । हैन भने म तिमीलाई कुनै पनि हालतमा संरक्षण दिन सक्दिन । बाकी तिम्रो जिम्मा ।
उहीँ तिम्री सासू
नेपाल आमा ।
२ असार २०७७, मंगलवार १६:१६ मा प्रकाशित